Best of Denglish - Kostenlose Ausmalbilder
Best of Denglish
Voalaza fa ny fiteny alemanina dia fiteny sarotra. Sa sarotra? Na izany na tsy izany dia tsy nanjary mora kokoa izany rehefa mianatra fiteny vahiny ianao. Marina indrindra izany ho an'ny fiteny idioma, ny fiavianao izay matetika tsy fantatrao ny tenanao. Avy aiza ny fehezan-teny miaraka amin'ity "société choral" ity?
Idioms alemà mampihomehy amin'ny anglisy
Afatory ny bera eo an-tampony - Afatory amin'ny bera ny olona iray
Efitra, efitrano! - Efitra, efitrano!
Izaho lavaka amin'ny vavony manontany
Ny anglisy -ko dia tsy ny mavo an'ny atody, fa mandeha izy - Ny anglisy -ko dia tsy ny mavo an'ny atody, fa mandaitra
Ankehitriny mandeha izy fa tena manodidina ny saosisy - Ankehitriny dia tena momba ny saosisy
Misy tena fisaka ve ianao, sa? - Tena reraka ianao, sa tsy izany?
Ity piggery ity dia tsy maintsy ataonao lavitra. - Tsy maintsy esorinao izao fikorontanana izao.
Mandehana ahy amin'ny famantaranandro fanairana ianao. - Manaintaina ny boriky ianao.
Tokony ampianao foana koa ny volombavanao, inona? - Tsy maintsy manampy ny voantsinapy foana koa ianao, sa tsy izany?
Pejy fisakaizana finamanana namana akaiky mandrakizay